“Ammas jaallee Daawud Ibsaa dabalatee ummaata kanaaf waliin hojjechuuf fedhii guddaa qabna” Dr. Alamuu Simee Hogganaa Waaj/ODP G/G – Bilisummaa
Itti gaafatamaan waajjira giddu galeessaa ODP Dr. Alamuu Simee haala yeroorratti ibsa kennaniin akka jedhanitti walii galteen ODP fi ABO waliin taasifame karaa keenya waanti diigame tokko hin jiru.
Jijjiirama amma dhufe kanaan jaarmiyaaleen siyaasaa maqaa shororkeessummaan himatamaa turan ABO dabalatee dhaabbileen siyaasaa maqaa Oromoon gurma’anis ta’ee kan biroo gara biyyaa galaanii karaa nagaa akka qabsa’an haalli mijataan uumaameera.
Kanneen keessaas ABO’n isa tokko yoo ta’u, jijjiiraama amma dhufe kana waliin tumsinee ummata keenya karaa ceesisuu dandeenyurratti waliin akka hojjennu akkasumas qabsoon hidhannoo hafee karaa nagaan qabsaa’uun akka danda’amu walii galameera.
Haalumaa kanaan, miseensonni waraanaa ABO jaallee Daawud Ibsaan hogganamu 1,300 ol ta’an Eetiraarraa karaa Kaabaa akka gaalan ta’eera. Isaan keessas kan qaama nageenyaatti dabalamanii hojjechuu danda’anis ta’ee kan biroo leenjii gahaa fudhatanii gara hojiitti akka galan hojjetamaa jira.
Hidhattoonni karaa Lixa Oromiyaa galanis karaa nagaa gara qaamaa nageenyaatti akka dabalamaniif walii gaalamus hanga ammaatti hojiitti hiikamuu hin dandeenye. Akkaataa wali galtee keenyaatiin humni hidhatee socho’u hundi karaa nagaatiin qabsaa’uu akka qabu ture. Garuu, hanga ammaatti kun hojiitti hiikamuu hin dandeenye.
Sababa kanaan ummanni keenya Lixa Oromiyaa jiran dararaa guddaa keessa jiru. Ijoolleen Oromoo naannoo sanaa barachaa hin jiran, caasaa mootummaa hojiin ala gochaa jiru, waajjira mootummaa tajaajila ummataaf kennu cufsiisuufi rakkooleen biroo ummatarratti raawwatamaa jira jedhan Dr. Alamuun.
Mootummaan osoo rakkoon kun hundi jiruu obsa guddaan ilaalaa tureera. Ji’a jaha guutuu obsameera.
Kanaaf,ammaan booda Oromiyaa keessatti qaama kamiinuu haa ta’u al-seerummaa raawwaatamu kamiifuu obsa hin qabu. Olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Nageenya ummaata keenyaa eegsisuufis itti gaafatamummaa guddaa qabna.
Ummanni keenya kana hubatee nageenyaa isaa eeggachuuf mootummaa cina hiriiruu qaba.
ODP’n paartii siyaasaa kamillee miidhuus ta’ee dhiibuuf fedhii hin qabu. Paartii ummata kanaaf karaa nagaa hojjechuuf fedhii qabuuf har’allee balballi keenya banaadha.
Yeroon yeroo itti tokko taanee ummata kanaaf hojjennuudha. Ta’us garuu, ABO’n walii gaaltee raawwate tokkollee hojiitti hiikuuf fedhii hin qabu. Sababa kanaan garuu ummanni keenya hedduu dararamaa jira.
Ammas jaallee Daawud Ibsaa dabalatee ummaata kanaaf waliin hojjechuuf fedhii guddaa qabna. Wal qoqqooduun yeroonsaa darbeera. Tokko taanee ummata Oromoof ni hojjenna kan jedhan Dr. Alamuun, kana gochuuf gama keenyaan qophii ta’uu keenya ummanni keenyas nu hubachuu qaba jedhan.
Haayyota Oromoo paartii biraa keessa jiran waliin bal’naan hojjechaa jirra.
Kana gochuu isaaf ODP’n dinqisiifatamuu qaba. Ilaalcha siyaasaan osoo wal hin qoodin ummata Oromoof paartilee maqaa Oromoon jiran waliin hojjechaa jirra. Ammas jaarmiyaalee siyaasaa biroofis balballi keenya banaadha jedhan Dr. Alamuun
Previous Ibsaa garee Shanee ABO, Jalle Dawud Ibsa fii khan ODP. Khuno caqasaa??
Next Dallaan diinummaa Oromoo gidduutti deebi’ee ijaaramee?